Firenena Indianina : Hanatsara ny tontolon’ny famokarana eto Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaFirenena Indianina : Hanatsara ny tontolon’ny famokarana eto Madagasikara
16/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ho fanamafisana ny fanaovan-tsonia nataon’ny Filoham-pirenena Indianina, Ram Nath Kovind sy ny Filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina Hery, teny Iavoloha ny alarobia teo dia nisy ny fanatanterahana ny fifanakalozana ara-barotra teo amin’ny mpandraharaha Indianina sy Malagasy, teny Anosy omaly. Fifanakalozana ara-barotra nifantoka tamin’ny seha-pihariana efatra, izay hifandraisan’ny roa tonta, dia ny famokarana angovo, fitrandrahana harena ankibon’ny tany, fizahantany ary ny famokarana lamba ho tombontsoan’ny firenena roa. Vonona hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampivoarana ireo lalam-pihariana ireo ny Fitondrana Indianina, hoy ny Filohany, Ram Nath Kovind nandritra ny fandraisany fitenenana ka nahatonga azy nanohana an’i Madagasikara amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny famokarana, izay fototry ny akora ilain’ny Inde amin’ny orinasany. Marihina fa tsy hita any Inde ihany fa vokatra ilain’ny tsena any ivelany ny vokatra eto amintsika, hoy hatrany ny fanamafisany. Koa amin’izao faha-50 taona nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny firenena Indianina sy Malagasy izao dia hatsaraina izany, ary nanome toky amin’ny haha-tomombana izany ny masovoihony miasa eto Madagasikara.
Ho an’i Madagasikara manokana kosa, nambaran’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery fa efa manana fomba fiasa hiarahana amin’ny mpamatsy vola isika, ka anisan’izany ny fametrahana ny “zone économique spécial”, ary eo ihany koa ny “zone économique exclusive” izay hahazoana mitrandraka harena ao anatin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara. “Namana hifanome tanana amin’izany i Inde. Hitondra rivotra vaovao ho an’ny toe-karena izao fiaraha-miasa izao, ankoatra ny efa niarahana niasa hatramin’izay. Hiompana amin’ny fanamorana sy ny fampivoarana ny indostria ny endriky ny fitondrana amin’izao fotoana izao, ankoatra ny fametrahana ny fangaraharahana amin’ny dingana atao amin’ny sehatra tsy miankina”, hoy kosa ny Filoha, Rajaonarimampianina, raha nandray fitenenana. Tanjona amin’ny fihaonana omaly, moa ny fidiran’ny vokatra malagasy mankany ivelany, tahaka ny any Inde, raha araka filazan’ny tale jeneraly ny fiaraha-miasa amin’ny fampandrosoana eo anivon’ny Sekretariam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, misahana ny fifandraisana sy ny fampivoarana, Ratsimandao Tahiry. “Araka ny tenin’ny Filoha malagasy, tanjona ny hisian’ny fifandanjana amin’ny fifandraisana ara-barotra fa ny tena tanjona lehibe dia ny hampiroboroboana ny vokatra malagasy any amin’ny sehatra iraisam-pirenena.” Nahatratra 150 ireo mpandraharaha Indianina tonga nifanakalo hevitra tamin’ity fifanakalozana ara-barotra ity. Teo koa ny fandraisana anjaran’ireo Federasiona iraisam-pirenena momba ny varotra sy ny tranoben’ny varotra eto Madagasikara, ary ireo fikambanan’ny mpandraharaha malagasy toy ny Gem, ny Fivpama. Nandray anjara tao koa ny EDBM. Mariky ny fahatokisana ny Fitondrana Malagasy izao fiaraha-miasa ataon’i Inde izao, hoy hatrany ny Filoham-pirenena malagasy. Ry zareo Indianina, etsy ankilany manantena vokatra amin’ity fihaonana ity.
Tao anatin’ny iray volana izay no nampakatra io vidim-bary io, hoy ireo mpamongady eny Anosibe. Izany hoe, iray volana taty aoriana nandraisan’ireo governemanta ny marimaritra iraisana ny fahefana, izay tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Raha tsiahivina, ...Tohiny